प्रेमीलाई घरमा बोलाएको बेला जब श्रीमान आइपुगे ! « Lokpath
प्रेमीलाई घरमा बोलाएको बेला जब श्रीमान आइपुगे !
काठमाडौं । एक पुरुष एक विवाहित महिलासँग अफेयरमा थिए । त्यसैले उनी विवाहित महिलाका श्रीमान घरमा नभएको दिन पारेर महिलाको घरमा गएका थिए । तर त्यो दिन नै अकस्मात महिलाका श्रीमान घर आए ।
महिलाका श्रीमान घर आएपछि ति महिलाका प्रेमी केहि सोच्न नसकेर झ्यालबाट नाङ्गै भागेका छन् । साथै उनी भाग्ने क्रममा घरको २० फिट माथिबाट जमिनमा खसेका छन् ।
यो भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भईरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यामका अनुसार यो घटना स्विट्जरल्याण्डको हो ।भिडियोमा महिलाका प्रेमी उनका श्रीमान आएपछि झ्यालमा केहिबेर झुन्डिन्छन् । तर उनी धेरै समयसम्म त्यहाँ झुन्डिएर बन सक्दैनन् र जमिनमा पछारिन्छन् ।
यनले झ्यालमा झुन्डिँदा मोजा र अन्डर वेयरमात्र लगाएर झुन्डिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भईरहेको छ । उनी झ्यालबाट तल खस्दा तल रहेको सेतो कारमा झरेका थिए ।
कारमा ठोक्किएर ति व्यक्ति जमिनमा झर्छन् । त्यहि मानिसको भिडियो एक महिलाले बनाईरहेकी थिइन् । त्यो मानिस जमिनमा पछारिने बित्तिकै उनले ओह माइ गड भन्दै चिच्याउँन थाल्छिन् त्यसपछि सबैलाई यो बारेमा थाहा हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यामका अनुसार ति व्यक्तिको उक्त महिलासँग अफेयर चलिरहेको थियो । ति व्यक्ति महिलाका पति आएर ढोका बजाउँना साथ झ्यालबाटै भाग्न लागेका थिए ।
तर भाग्ने क्रममा ति व्यक्ति घरको २० फिट माथिबाट जमिनमा झरेका थिए ।
The woman’s husband came home early😂 https://t.co/eIXwco480N
— Ross McCulloch (@Rossmac212) January 30, 2020
प्रकाशित मिति: २०७६,माघ,२३,बिहीवार १४:२१
७३ वर्षीया वृद्धाले आफ्नो विवाहका लागि दुलाहा खोज्न विज्ञापन छपाएपछि…
एजेन्सी । भारतको कर्नाटकी एक ७३ वर्षीया महिलाले आफ्नो विवाहका लागि दुलाहा खोज्दै विज्ञापन छपाएकी छन् । ७३ वर्षीया अवकाशप्राप्त शिक्षक
लकडाउनमा पनि विवाह त बाजा बजाएरै गर्ने हो !
काठमाडौं । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा एउटा ‘भिडियो क्लिप्स’ भाइरल भइरहेको छ । यो भिडियो हेर्दा तपाईको हाँसो रोकिँदैन ।
कोरोनालाई टक्कर : मास्कमाथि भएपनि लगाउने हो गहना !
काठमाडौं । विवाहमा राम्रो लुगा लागाउने, गहना लगाउने चलन पहिले देखी नै रहँदै आएको छ । नयाँ लुगा लगाउने, गहना
भारतमा सिंहमा देखियो कोरोना
काठमाडौं । कोरोना कहरका कारण अहिले सारा विश्वनै आक्रान्त छ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना १५ करोड ७५ लाख ६८
प्रेसर कुकरले हानेर श्रीमतीको हत्या गर्ने थारु पक्राउ
जिल्ला अस्पताल ताप्लेजुङलाई ८ थान अक्सिजन सिलिण्डर प्रदान
कुहिने फोहोरबाट मल उत्पादन
निकुञ्जमा मारिएका कर्मचारीको नामबाट छावाको नामकरण
महामारीमा बढ्दो आत्महत्या : आईसोलेसन बसेकाहरुलाई यसरी हेरचाह गरौँ
मनाङमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा समस्या
बाँकेमा थप पाँच कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु
कांग्रेस उपसभापति गच्छदार पत्नी निर्मलाको निधन